Ihe ị ga-ahụ na Seville | Akụkọ Njem
Seville na-bụ obodo ndịda Spain nwere ọtụtụ nka, ebe akụkọ ihe mere eme na nke anyị nwekwara ike ịnụ ụtọ ihu igwe dị mma ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ niile. Ọ bụrụ na anyị na-eme atụmatụ njem gaa obodo a, anyị ga-enwerịrị ndepụta na ihe niile anyị na-agaghị echefu maka ihe ọ bụla n'ụwa, ya mere, attentionaa ntị n'ihe niile enwere ike ịhụ na Seville.
Site na ihe ncheta kachasị mma ya na nnukwu oghere dị n'èzí, Seville na-bụ obodo na ndụ dị mma, yana ebe izu ike na ebe mara mma nke akụkọ ihe mere eme na-ahapụghị gị enweghị mmasị. Anyị nwere ndepụta nke ọtụtụ ihe ị ga-achọ ịhụ, ma n'ezie enwere ọtụtụ ndị ọzọ fọdụrụ.
1 Royal Alcazar nke Seville
2 Katidral nke Saint Mary nke Lee
4 ụlọ elu nke Gold
5 Ogige Spain
7 General Archive nke ndị Indies
8 Isabel II Bridge
9 Pilatelọ Paịlet
10 Lọ ihe nkiri nke Ọma Arts
11 Flamenco Dance Museum
Royal Alcazar nke Seville
Ochie nkeji iri na ise nke obodo Seville na-aga ogologo ụzọ, ma n'ezie na anyị nwere na-amalite na ihe dị ka ndị mara mma dị ka Ezigbo Alcazar, obí eze ewusiri ike ebe ị nwere ike ịhụ ihe nketa nke ọkwa dị iche iche dị iche iche, site na Mudejar ruo Gothic. Ọ nwere oge ndị Alakụba na nke ndị Kraịst, mgbe mbụ ewusiri ike sitere na Middle Ages. N'ime anyị nwere ike ịga njem ogologo nke anyị ga-agafe na patios na ime ụlọ dị iche iche, mara mma niile. Echefula ihe di mkpa dika ubi ya mara mma.
Katidral nke Saint Mary nke Lee
Nke a bụ katidral kachasị nke ndị Gothic n'ụdị ụwa. Ugbu a, Giralda bụ akụkụ ya, ebe katidral dị na ala ebe nnukwu ụlọ alakụba dị, nke akwatuola iji wuo katidral ọhụrụ ahụ mmalite narị afọ nke XNUMX. N'ime ya anyị nwere ike ịga leta Patio de los Naranjos ochie, nke na-esote ya enwere ọtụtụ ọba akwụkwọ. N'aka nke ọzọ, n'ime e nwere ụlọ ụka dị iche iche, ili nke Christopher Columbus, ebe ịchụàjà na ebe ịchụàjà.
Ọ bụ ezie n'ụdị Giralda akụkụ nke katidral ugbu a dị ka ụlọ mgbịrịgba ya, eziokwu bụ na ọ na-enwu n'onwe ya. Ọ bụ ụlọ arụsị ochie nke ụlọ alakụba ma ọ ka na-enwe otu ụdị ahụ, nke nke ụlọ alakụba Koutoubia na Marrakech. Towerlọ elu a bụ ngwakọ, ebe ọ bụ na akụkụ nke elu bụ nke oge Ndị Kraịst ọhụrụ, ebe mgbịrịgba dị.
ụlọ elu nke Gold
Ọ bụrụ na ị ga-aga ije na Guadalquivir, ị ga-erute onye a maara nke ọma ụlọ elu nke Gold. E wuru ya na narị afọ nke iri na atọ na ogologo oge echere na ọmarịcha amamịghe ya bụ n'ihi na ejirila taịl kpuchie ya, n'agbanyeghị na emesịrị chọpụta na mkpuchi ya bụ nzu na ahịhịa amị. Gburugburu ụlọ elu a, ị nwere ike ịchọta ọtụtụ onyinye ndị njem, site na bọs iji hụ obodo ahụ ruo obere ụgbọ mmiri.
Ha na-ekwu na ọ bụ otu n'ime ihe ndị mara mma n'ụwa ma ọ bụghị ihe ijuanya. Ọ dị na Maria Luisa Park mana, dị ka Giralda, o kwesịrị akụkụ pụrụ iche. Ọ bụ ọkara-elliptical na udi na nwere a Central isi iyi.
Ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ ịhapụ obodo, lee, anyị nwere nke mbụ ogige obodo mepere emepe. Ọ bụ ezigbo sara mbara ogige, na Plaza de España, ọtụtụ roundabouts na Plaza de América. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji maapụ gaa ebe mmasị, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na anyị nwere oge, anyị nwere ike ịhapụ onwe anyị oge niile ma jiri nwayọ na-achọpụta akụkụ.
General Archive nke ndị Indies
Emepụtara faịlụ a site na iwu nke Carlos III na narị afọ nke XVIII iji jikọta n'otu ebe akwụkwọ njikwa nke emere na mpaghara Spanish nke mba ofesi. Lọ ahụ nwere ụdị mara mma nke Herrerian Renaissance na nnabata bụ n'efu.
A maara akwa a dị ka Àkwà mmiri Triana,, ebe ọ bụ na ọ na-ejikọ etiti ahụ na mpaghara Triana. Ọ bụ ihe na-akpali mmasị na e wuru ya na 1852 na ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri kacha ochie wuru na Spain. Na njem anyị na-aga n'akụkụ osimiri ahụ, na mgbakwunye na ịhụ Torre del Oro, anyị nwere ike ịhụ akwa ndị ọzọ na-agafe Guadalquivir, dịka Puente del Alamillo ma ọ bụ Puente de la Barqueta.
Este mara mma Andalusia obí Ha nwere udiri agwakọta nke Italian Renaissance na nke Mudejar. A na-ahụta ya nnukwu ụlọ Sevillian mara mma ma dị n'akụkụ Plaza de Pilatos. O sitere na narị afọ nke XNUMX ma bụrụ ebe obibi nke ndị isi nke Medinaceli.
Lọ ihe nkiri nke Ọma Arts
Thelọ ihe nkiri nke Ezi Arts bụ ihe dị mkpa maka ndị niile nwere nchegbu gbasara nka na ọdịbendị. Ọ dị na Plaza del Museo, a na-ebi ya n'otu ụlọ na ụdị omume Andalusian. N'ime anyị na-ahụ ime ụlọ iri na anọ haziri nke ọma, na-arụ ọrụ site na ha ndị na-ese ihe dịka Zurbarán.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ imikpu onwe anyị n'ụzọ zuru ezu na flamenco ụwa, ọ dịghị ihe dị mma karịa ileta Museum nke Flamenco Dance. Ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ usoro ịgba egwu, klaasị flamenco, ihe ngosi flamenco ma ọ bụ ụlọ ahịa iji zụta ihe ncheta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ihe ị ga-ahụ na Seville
Oxford iji kwado ngosi na Tolkien na 2018
Mara Islet nke Vila Franca do Campo